Ngokholo lwethu lobuKristu, sinokwenza okubi kakhulu ukuthetha ngezinto ezibuhlungu okanye ezixinezelayo njengezono kunye nentlungu. Nangona kunjalo, kukho iindinyana ezininzi ezithetha ngokucinga okulungileyo . Ngamanye amaxesha sifuna kuphela ukunyuswa okuncinci ukusikhetha. Nazi ezinye iindinyana zeBhayibhile ekucingeni okulungileyo ukuba unike imini yakho incinci encinane:
Iindinyana Ngokuphathelele Ubuhle
Kwaye ngoku, bazalwana noodadewethu abathandekayo, enye into yokugqibela.
Hlela iingcamango zakho kwizinto eziyinyani, kwaye zihloniphekile, zilungile, zihlambuluke, zihle kwaye zithandeke. Cinga ngezinto ezintle kwaye zifanelekile ukudumisa. (NLT)
Akungena emlonyeni wakho okukuhlambelayo; uyinqambi ngamagama aphuma emlonyeni wakho. (NLT)
KwabaseRoma 8: 28-31
Kwaye siyazi ukuba kuzo zonke izinto uThixo usebenzela okulungileyo kwabo bamthandayo, ababizwe ngokuvumelana nenjongo yakhe. Kuba abo uThixo ngaphambili babemisele ngaphambili ukuba bafanelane nomfanekiso woNyana wakhe, ukuze abe ngowamazibulo phakathi kwabazalwana noodade abaninzi. Kwaye abo babemisele ngaphambili, wabiza; abo babememezayo, wabalungisa; abo babethethayo, wazukisa. Yintoni, ngoko, sisithi ngokuphendula kwezi zinto? Ukuba uThixo unathi, ngubani onokumelana nathi? ( NIV)
Ngaphezu kwakho konke, qapha intliziyo yakho, ngokuba yonke into ophuma kuyo. (NIV)
Xa udla okanye usela okanye wenza nantoni na into, soloko ukwenza ukuhlonela uThixo.
Iindinyana malunga Nokunyuka Injabulo
INdumiso 118: 24
INkosi iyenzile lo mhla; Masibe nemihlali namhlanje kwaye sivuyiswe. (NIV)
Intliziyo evuywayo yinyango elungileyo, kodwa umoya otyumkileyo uyamisa amathambo. (NIV)
Efese 4: 31-32
Gweba konke ukukrakra, ukufutheka, umsindo, amazwi anomsindo, nokunyundela, kunye nazo zonke iintlobo zokuziphatha okubi.
Kunoko, yibani nomusa komnye nomnye, nithandeke, nithethelelane, njengokuba uThixo ukuxolele ngoKristu. (NLT)
Ndikushiya ngesipho-uxolo lwengqondo nentliziyo. Yaye uxolo endikunikeyo sisipho esingaze sinike ihlabathi. Ngoko ningakhathazeki okanye niyike. (NLT)
1 Yohane 4: 4
Nina ningabantwana, bancinane, nilinqobile ngenxa yokuba lowo ophakathi kwenu mkhulu kunalowo osehlabathini. (NKJV)
Efese 4: 21-24
Ukuba ngokwenene nimvile kwaye nifundiswe kuye, njengokuba inyaniso kuYesu, ukuba, ngokubhekiselele kwindlela yenu yangaphambili yobomi, nibeka bucala umntu omdala, owonakalisa ngokukrakra kweenkohliso, kwaye uhlaziywe ngumoya wengqondo yakho, kwaye ugqoke uqobo olutsha, olufana noThixo luye lwadalwa ngobulungisa nobungcwele benyaniso. (NASB)
Iindinyana Ngokumazi UThixo Ukhona
Musa ukuxhalaba malunga nantoni na, kodwa kuyo yonke imeko, ngomthandazo kunye nesikhalazo, ngokubonga, faka izicelo zakho kuThixo. (NIV)
UNahum 1: 7
INkosi ilungile, isiphephelo ngexesha leengxaki. Uyabakhathalela abo bayamthembayo (NIV)
Kuba ndiyazi izicwangciso endinaso kuwe, "utsho uYehova," uceba ukuphumelela kwaye akuyi kukulimaza, uceba ukunika ithemba nekamva.
Unokuthandazela nantoni na, kwaye ukuba unokholo, uya kufumana. (NLT)
Kodwa ukuba sivuma izono zethu kuye, uthembekile kwaye ulungile ukusixolela izono zethu nokusihlambulula kuzo zonke izinto ezimbi. (NLT)
Kodwa ndiqinisekile ukuba ndiya kubona ubuhle bukaYehova ngelixa ndilapha ezweni labaphilayo. (NLT)
Mateyu 11: 28-30
Wathi ke uYesu, Yiza kum, nonke nina niyadinwa, nithwale imithwalo enzima, ndikunike ukuphumla. Thatha ijoka lam phezu kwenu. Makhe ndikufundise ngenxa yokuba ndithobekile kwaye ndithobile entliziyweni, kwaye uya kufumana impumulo yemiphefumlo yakho. Ngokuba ijoka lam lilula ukuyithwala, kwaye umthwalo endikunika wona ulula. "(NLT)
Indlela Yokufunda IBhayibhile Yenguqu
Amagama asePetru Amadoda avela eBhayibhileni
Abadlali beNtsundu Bakhulume Ngemibala
UMariya uMagdalene, uPatron Saint wabafazi
I-Sewanee GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
Iingoma zeNkosana eziphezulu ze-80s, Volume 1
Indlela Yokuba I-Dribbler yoLwazi
Ibhomu le-Atomic yaseHiroshima neNagasaki, ngo-1945